कुलमान घिसिङ भन्छन् : गाउँ उज्यालो बनाउने कसम खाएको थिएँ , देशै उज्यालो बनाएँ,,,, सम्मान स्वरूप एक सेयर गरौ। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कुलमान घिसिङ भन्छन् : गाउँ उज्यालो बनाउने कसम खाएको थिएँ , देशै उज्यालो बनाएँ,,,, सम्मान स्वरूप एक सेयर गरौ।
कुलमान घि’सिङ अहिले चर्चामा रहेकामध्ये एक हुनु । उहाँको आँसु , रोदनभित्र मुलुकको आशा भरोसा अनि विकृति र कुण्ठा पनि सँगसँगै चर्चामा छ । आखिर कुलमान को हुन् ? उनले जीवनमा कसरी प्रगति गरे ? के के हण्डरहरू खाए ? भने सन्दर्भमा योहो टेलिभिजनको पीवाईएल सो (PYL SHOW) कार्यक्रममा कुलमान घिसिङसँग गरिएको रोच’क कुराकानी ।
रामेछापको दुर्गममा गाउँको सरकारी स्कुलमा पढेको एक सामान्य किसानको छोरो अहिले नेपाली जनताको मनमुटुमा बास बस्न सफल भएको छ । देश’लाई लोडसे’डिङबाट मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भित्र्याउने अभियन्ता कुलमान घिसिङले वि’द्यालय पढ्दाको अनु’भव यसरी सुनाउँ छन् :
गाउँमा टुकी बालेर पढ्थेँ । राति अ’बेरसम्म टुकी छेउमा बसेर पढ्दा नाकमा कालो ध्वाँसो स’मेत बसेको हुन्थ्यो ।
काठमाडौँलाई लो’डसेडिङ मु’क्त गराए’र चर्चा कमाएमा कुलमान भन्छन्न् मैले काठमाडौँ आएपछि नै हो, बिजुली देखेको । विद्यालयमा सधैं प्रथम हुने कुलमानले जब काठमाडौँमा आ’एर बिजुली देखे, तब उनले क’सम खाए मेरो गाउँमा पनि यसैगरी बिजुली बाल्छु । अहिले उहाँले गाउँमा बिजुली बालिसकेका छन् । उहाँले आफ्नो गाउँमात्रै हैन, देशैभरि उज्यालो बनाउने अभियन्ता बनेका छन्न् ।
कुल’मान घिसिङ जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक बनेर आए, उनले आफूले के गर्न सक्छु भनेर देखाइसकेका छन् । कुलमानले थालेको लोडसेडिङ मुक्त अभियानले चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ । आखिर को हुन् त कु’लमान ?
Previous प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगरमा MCC वि,रुद्ध नेपालका लागि नेपालीको ख’बरदारी सभा…हेर्नुहोस l
Next स्वास्थ्यकर्मी हुन त उनी जस्ता जस्ले को’रोना सं’क्रमितको अवस्था ग’म्भीर भएपछि आफ्नै र’गत दिएर ज्या’न बचाइन…उनलाई उच्च सम्मान ।